kwụsị gị ugbu a si exporting Spotify playlist
Part 1. Wepụ gị Spotify playlist si Google Chrome na mbubata ya azụ
Part 2. Export a playlist dị ka a ederede faịlụ na mbubata
Part 3. Detuo a na-akọrọ Spotify playlist
Record Spotify music online free na TunesGo
Spotify listi ọkpụkpọ nwere ike ịbụ tricky, karịsịa ma ọ bụrụ na ị bụ onye ka m. M bit nke a Klutz ị na-ahụ na ọ bụghị na-adịghị ahụkebe n'ihi na m ka m ejedebe na-ehichapụ songs, egwu na listi ọkpụkpọ na m Spotify akaụntụ. Ugbu a, a nwere ike ịbụ a bit nke a setback maka onye ọ bụla bụ oké music n'anya. M n'aka na ị ga-aghọta.
Na, ya mere ebe m na-achọ ụzọ na-na nke a ọnọdụ na-niile m songs na listi ọkpụkpọ azụ Spotify mgbe m hụrụ ụfọdụ ịtụnanya nhọrọ ime otú ahụ. M na-aga ịkọrọ ha niile na gị taa.
1.Extract gị Spotify playlist si Google Chrome na mbubata ya azụ
Ọ bụ ihe dị mfe ndọtị maka Google Chrome na-ahapụ gị wepụ ndepụta ọkpụkpọ gị n'enweghị na enyemaka nke otu click. Nke ahụ dị mma!
Nke a ndọtị ga-ekwe ka ị wepụ ihe .m3u playlist / json n'usoro nke ihe si gị Spotify listi ọkpụkpọ na enyemaka nke nanị otu click. Ebe a bụ ihe i nwere ime.
Nzọụkwụ 1: Pịa na ndị na-esonụ njikọ ibudata Spotify Playlist extractor, a plugin maka Google Chrome. Na-esote na ihuenyo, pịa bọtịnụ kwupụta n'aka nri n'akụkụ na-ekwu na 'Tinye chrome'.
Nzọụkwụ 3: Ugbu a na ị ọma kwukwara na ndọtị na Google Chrome, ị ga-ahụ a obere button nri na-esote na menu bọtịnụ na Chrome (anya na acha ebe n'aka-nri n'akụkụ nke a screenshot).
Nzọụkwụ 4: N'ihi na akụkụ ikpeazụ, na-aga https://play.spotify.com na-aga 'Playlist', ewerekwa playlist site na ịpị ya. Pịa na "Spotify Playlist extractor" button na-eche maka ya na-arụ ọrụ, bụrụ na ị nwere ọtụtụ ihe na gị playlist, ọ ga-ọbụna na-akpaghị aka pịgharịa gị playlist ke hà etiti oge nke 5 sekọnd. Ozugbo okokụre, a ọhụrụ taabụ ga-emeghe elu na a formatted n'ihi gị playlist ihe.
2.Export a playlist dị ka a ederede faịlụ na mbubata
Ugbu a, ọ bụrụ na ị bụghị na ok nbudata a Google Chrome ndọtị na niile, i nwere ike ịgbalị usoro a dị ka ọ bụ a ezigbo mfe na-eso. A bụ otú na-amalite. Mepee Spotify na gị na desktọọpụ nakwa ẹkedori a ọhụrụ Okwu akwụkwọ. Na-etinye ha n'akụkụ site n'akụkụ na gị na desktọọpụ. Ugbu a, ọ bụ oge gị na ka a mata ndị niile songs na ị chọrọ bupu on Spotify na nanị ịdọrọ ha na-akwụkwọ na i megheworo. Rịba ama na egwu ma ọ bụ song aha ga-pasted na-odide ahụ dị ka hyperlinks na mgbe pịrị ga-ewe gị ndị akpan akpan songs on Spotify.
A bụ ihe a screenshot nke otú nke a ga-ele anya.
3.Copy a na-akọrọ Spotify playlist
Ugbu a, ọzọ a na-arụ ọrụ na desktọọpụ otú biko cheta na ị na-agaghị enwe ike iji usoro a na mkpanaka gị na ngwaọrụ dị ka Android, iPhone ma ọ bụ iPad.
Tupu ị malite, hụ na ị nwere Spotify arụnyere na kọmputa gị. Ebe a bụ njikọ ibudata ya. Ozugbo ị na-mere nbudata na ngwa ma wụnye ya dị ka nke ọma, na-eso n'okpuru nyere nzọụkwụ.
Nzọụkwụ 1: Ẹkedori ke Spotify ngwa na pịa na playlist na ị chọrọ depụtaghachiri. Ị kwesịrị ị na-ahụ ugbu a na ndepụta nke songs na playlist na i nwere ike mata ma ọ bụ họrọ ..
Nzọụkwụ 2: Pịa na ihe ọ bụla nke egwu na mgbe ahụ ka họrọ niile songs na playlist, pịa Ctrl + A (Windows) ma ọ bụ Wụk + A (Mac). Nke a kwesịrị ugbu a mata na usoro egwu niile na-agbanwe ha na agba ka a ìhè na agba ntụ.
Nzọụkwụ 3: Mee a nri click ọ bụla nke tracks ugbu a na site na dobe ala menu, họrọ nhọrọ nke 'Tinye ka'. Site ọzọ set nke nhọrọ, ị nwere ike ma họrọ 'New Playlist' ike ọhụrụ playlist kpam kpam na aha ọhụrụ ma ọ bụ dị mfe họrọ onye ọ bụla n'ime ndị listi ọkpụkpọ egosipụta.
Nke ahụ bụ ya. Ozugbo ị na-eso ụzọ a, ị ga-ejedebe na-eke a oyiri nke playlist na ị chọrọ ghara ịgbanwe gị Spotify akaụntụ. N'ezie, ọ bụ dị ka ihe ọma dị ka eke ọhụrụ playlist ma na-enweghị ihe ọ bụla nke hassles na nrụsi mgbalị na-aga n'ime agbakwunye ọkacha mmasị gị songs otu otu.
Download / Record Spotify music online free na TunesGo
> Resource> Spotify> Export Spotify Playlist, ndabere Spotify Playlist ma ọ bụ Naghachi